Dabratsiyoon GabraMikaa'el (PhD): 'Waraanni nurratti labsamee ture' - BBC News Afaan Oromoo
Pireezidantii Ittaanaan Naannoo Tigraay DabraTsiyoon GabraMikaa'el (PhD) dhimmoota naannoofi biyyaa gaaffilee gaazexeessitootarraa dhiyaateef deebii kennaniiru.
Eebba kitaabaa MM Abiy Ahimad 'Ida'amuu' irratti ministirri muummichaa haasawa godhaniin ''Pireezidant Isaayyaas Afaworqii daandiiwwan Maqaleerra socho'uu barbaadu.
Kanaafis abbootiin amantaa kadhannaan nu gargaaraa,'' jedhanii turan. Dubbii kana akkamiin ilaaltu gaaffiin jedhu dhiyaateeraaf.
''Mootummaan Naannoo Tigraay, walitti dhufeenyi uummatoota Ertiraafi Tigraay akka cimu barbaada. Walitti dhufeenyi kunis gara daldalaafi waltahinsaatti akka cehu fedhii qaba.
Lammiileen Ertiraas naannichatti hojiilee garagaraa akka hojjetaniif mootummaan hayyameefi hojjechaa jiru,'' jedhan.
''Mootummaan Federaalaa waan hin hojjenne, nutu hojjechaa jira. Waan qabnu addaan hirannee jiraachaa jirra. Firoomni halaalaa hin cimu.
Hojii mootummaan Federaalaa hojjetaa jiru biratti qabamee yoo ilaalamu, nuyi hojii kitila hojjechaa jirra.''
Dubbii MM 'Kadhannaan nu gargaaraa' jedhuufis, mootummaan naannichaa fedhii nagayaaf qabu yeroo mara akka ibsuufi walitti dhufanii mari'achuun fala fiduun akka danda'amu ibsan.
''Pireezidantichi konkolaataa moo xiyyaaraan dhufu kan jedhu dhiisnee, karaan otoo hin banamin akkamiin dhufuu danda'u? jennee haa gaafannu.
Nuti karaan cufame akka banamu barbaanna. Yoo dhufanis keessummeessuuf qophiidha.
Daandiin banamee konkolaataan akka dhufan malee, xiyyaaraan akka dhufan hin eegnu,'' jedhan.
Amma duras walarguuf barbaadanii, dhimmoota garagaraan otoo walinargin hafuusaanii kaasaniiru.
'Sabni Tigraay balaarra jira'
''Wayita ammaa jechi 'sabni Tigraay balaa keessa jira' jedhu, mootummaan naannichaa gaaffii hawaasni kaasu dhoksanii bira darbuuf itti fayyadamaa jira, qeeqni jedhu ni ka'a,'' gaaffiin jedhu dhiyaateeraaf.
''Balaan uummata keenyarratti dhufe jira; kanaafidha tokko haa taanu kan jennu.
Jiraachuu uummatichaarra sodaaleen dhufan jiru. Nageenyi uummataa yoo eegamuudhaa baate ammoo, gaaffileen bulchiinsa gaariifi lafaa hiikkaa hinqaban,'' jechuun deebisaniiru.
''Kanaafis yeroo kamuu nageenya uummata Tigraay eegsisuuf dursa kennina.
Amma dura miseensonni farra-shorokeessaa Poolisii Federaalaa 43 tahan Buufata Xiyyaaraa Maqalee dhufan, nurratti waraanni akka labsametti fudhanna.
Nutu dhukaasuu dide malee, isaanoo waraana labsanii turan,'' jedhan.
Walitti baquu ADWUI
Koreen Giddu galeessaa ABUT (TPLF) garaagarummaan dhaabbilee ADWUI gidduu jiru 'abiddaa fi cidii' bakka tahee jirutti, dhimmi walitti baquu ka'uu hinqabu jechuun isaa ni yaadatama.
Waajirri addichaas ibsa yaada kana mormu baasee ture.
MM Abiy Ahimadis (PhD) haasawa Paarlaamaatti dhiyaatanii godhan irrattis, Yaa'ii dhaabichaa Hawaasaatti godhamerratti mariin godhamee akka falli barbaadamuuf waliigalamee ture. Yaada kanarratti kan walhingalle ba'uu danda'a jedhaniiru.
Dhimma kanarrati yaadni isanii maal akka tahe kan gaafataman Dabretsiyoon (PhD), ABUT walitti baquurratti yaada addaa akka hinqabnefi hojiirra akka oolu akka amanu dubbatu.
''Sagantaan siyaasaa dhaabbilee afranii tokko ture - Demokraasii Warraaqsaa ture. Amma garuu tokko miti. Adda addummaan keenyas ifa baheera.
Dhaabbileen maqaasaanii geeddaratan, sagantaasaanis geeddaruuf yaadanii turan. Sagantaa siyaasaa jijjiirame waliin gara Hawaasaa dhufaniiru otoo tahe, gaafas adda baana turre,'' jedhan.
Garaagarummaan amma jiru, kan sagantaa siyaasaa tahuu kan dubbatan Dabretsiyoon (PhD), ''ABUT miti kan waadaasaa hin eegne. Yaa'ii Hawaasaa booda nu gantaniittu jennee itti himaa jirra.
ADWUI'n fedhii sagantaa siyaasaa jijjiiruu qaba taanaan, yaa'ii ariifachiisaa yaamuu qaba,'' jechu Pireezidantii Ittaanaan kun.
Dhimma hiriira dhorkamanii
Torbee dabre keessa hiriirri lama magaalaa Maqaleetti adeemsifamuuf turan dhorkamaniiru.
Hiriirri waamamee ture kunis dhimma haleellaa dubartootaarra gahaa jiru balaaleeffachuuf ture.
Hiriira dhaabni miti-mootummaa 'Sab Hidrii' jedhamu yaame kana, bulchiinsi magaalaa Maqalee dhorkeera.
''Mootummaan dhimma dubartootaa xiyyeeffannoo itti kennee hojjechaa jira. Hiriirri dhorkamuu dhagaheera. Maaliif dhorkitu? jedheera. Tigraayif ni fayyada kan jedhu jiraannaan, nu arrabsuufis tahu hiriira bahamuu qaba,'' jedhu.
MM Abiy Ahimad (PhD): 'ADWUI'n yoo hin jiraanne, biyyi hin jiru yaadni jedhu sirrii miti'
Yeroo dhuma kan haaromfame: 1 Bitooteessa 2021